1) Ivikela Ubumfihlo
Ukuqinisekisa ubumfihlo bezivakashi ku-stonesaudio.nl kuwumsebenzi obalulekile kithi. Yingakho sichaza kunqubomgomo yethu yobumfihlo ukuthi yiluphi ulwazi esiluqoqayo nokuthi silusebenzisa kanjani lolu lwazi.
Ngokusebenzisa ulwazi namasevisi ku-stonesaudio.nl, uyavumelana nenqubomgomo yethu yobumfihlo kanye nemibandela esiyifakile lapha.
Uma ufuna ukuthola ulwazi olwengeziwe, noma unemibuzo mayelana nenqubomgomo yobumfihlo ye-stonesaudio.nl kanye ngokukhethekile ne-stonesaudio.nl, ungaxhumana nathi nge-info@stonesaudio.nl
4) Ukuqapha ukuziphatha kwezivakashi
I-stonesaudio.nl isebenzisa amasu ahlukahlukene ukuze ilandelele ukuthi ubani ovakashela iwebhusayithi, ukuthi lesi sivakashi siziphatha kanjani kuwebhusayithi nokuthi yimaphi amakhasi avakashelwayo. Lena indlela evamile yokusebenzela amawebhusayithi ngoba inikeza ulwazi olunikela kukhwalithi yolwazi lomsebenzisi. Ulwazi thina, ngamakhukhi, Bhalisa, ihlanganisa amakheli e-IP, uhlobo lwesiphequluli namakhasi avakashelwe.
Siphinde siqaphe lapho izivakashi ziqala ukuvakashela iwebhusayithi nokuthi ziphuma kuliphi ikhasi. Sigcina lolu lwazi ngokungaziwa futhi aluxhunyanisiwe nolunye ulwazi lomuntu siqu, ulwazi olufakwe kumawebhusayithi.
5) Ukusetshenziswa kwamakhukhi
stonesaudio.nl ibeka amakhukhi nezivakashi. Senza lokhu ukuze siqoqe ulwazi olumayelana namakhasi abasebenzisi abawavakashelayo kuwebhusayithi yethu, ukugcina umkhondo wokuthi izivakashi zibuya kaningi kangakanani futhi ubone ukuthi imaphi amakhasi enza kahle kuwebhusayithi. Siphinde silandelele ukuthi yiluphi ulwazi isiphequluli esabelana ngalo.
6) Khubaza amakhukhi
Ungakhetha ukukhubaza amakhukhi. Ukwenza lokhu ngokusebenzisa izinketho zesiphequluli sakho. Ungathola ulwazi olwengeziwe mayelana nalezi zinketho kuwebhusayithi yomhlinzeki wesiphequluli sakho.
7) Amakhukhi Weqembu Lesithathu
Kungenzeka ukuthi abantu besithathu, njenge-google, sikhangisa kusizindalwazi sethu noma ukuthi sisebenzisa enye isevisi. Kwezinye izimo, lezi zinkampani zangaphandle zibeka amakhukhi alokhu. Lawa makhukhi awakwazi ukuthonywa yi-stonesaudio.nl.
8) Abakhangisi bethu
Amaqembu amaningana akhangisa ku-stonesaudio.nl, bonke ababeka amakhekhe abo.
Laba bakhangisi basebenzisa ubuchwepheshe ezikhangisweni zabo kanye nezixhumanisi ezitholakala ezikhangisweni zabo ezibonwa ngokushesha yisiphequluli sakho.. Phakathi kwezinye izinto, basebenzisa ukubonwa okuzenzakalelayo kwamakheli e-IP athunyelwe ngokuqondile kumkhangisi.
Zonke lezi zinhlangano zinenqubomgomo yazo yobumfihlo futhi zisebenzisa le nqubomgomo yobumfihlo ukuze zisebenzise iwebhusayithi yazo kanye nezinsizakalo ezihambisanayo. Ulwazi olwengeziwe mayelana nokuthi lezi zinhlangano zibhekana kanjani nobumfihlo zingatholakala kumawebhusayithi alezi zinhlangano.
9) Inqubomgomo yobumfihlo yabakhangisi/abesithathu
Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe mayelana nenqubomgomo yobumfihlo yabakhangisi bethu kanye nezinkampani zangaphandle ezihlotshaniswa nale webhusayithi, sicela uvakashele amawebhusayithi alezi zinhlangano. stonesaudio.nl ayikwazi ukuba nomthelela kulawa makhukhi kanye nenqubomgomo yobumfihlo yamakhukhi ebekwe abantu besithathu. Lawa makhukhi angaphandle komgomo wobumfihlo we-stonesaudio.nl.
10) Ikhukhi le-DART elivela kwa-Google
Ukusebenzisa kwe-Google ikhukhi le-DART, ivumela izikhangiso ukuthi ziboniswe kuwebhusayithi yethu. Ngaphezu kwalokho, le khukhi isetshenziselwa ukukhombisa izikhangiso kwamanye amawebhusayithi. Ungakhetha ukungasayisebenzisi i-DART Cookie. Dat doet u door de volgende website te bezoeken: DART
© 2022 Europe Ukuqomisana Online • Kwakhiwe nge KhiqizaPress